तपाइँलाई थाहा पाउनुपर्दछ कि रचनात्मक ब्लकलाई पार गर्न १२ सल्लाहहरू क्रिएटिव अनलाइन
रचनात्मक अवरोधको लागि सुझावहरू
एन्टोनियो मउबाएड | | सामान्य, धेरै
त्यहाँ दिनहरू छन् जब प्रेरणा हाम्रो पक्षमा हुँदैन। हामी सामाजिक नेटवर्कहरू द्वारा व्याकुल हुन्छौं, कार्य ढेर र हाम्रो सृजनात्मकता ब्लक बढ्छ।
यो एक परिदृश्य हो जुन प्रत्येक सृजनात्मक उहाँसँग समय-समयमा हुन्छ। कि डिजाइन गर्न सजिलो समय संग र म्यूज देखा पर्दैन, यो यसको अनुपस्थिति द्वारा स्पष्ट छ जब यो अधिक आवश्यक हुन्छ। निराशा र नराम्रो मुडले तनाव लिन थाल्छ।
र त्यो हो यदि हामी खराब मुडमा छौं भने हामी कसरी डिजाइन गर्न सक्दछौं? तपाईले दिमागको त्यो फ्रेममा राम्रो काम पाउने सम्भावना छैन। त्यसोभए रचनात्मक अवरोधको समाधान मध्ये एक हाम्रो मुड सुधार्नु हो, र खाली पृष्ठसँग संघर्ष गर्नु हुँदैन।
तपाईलाई आफु भन्दा बढी के मन पर्छ भनेर कसैलाई पनि थाहा छैन, यद्यपि म यहाँ तपाईलाई दिन्छु सुझावहरूको सूची जुन तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ कालो प्वालबाट बाहिर निस्कन:
1 कुनै सान्त्वना छैन
2 श्वास बाहिर निकाल्नुहोस्
3 सामाजिक नेटवर्क
4 तपाईंलाई मनपर्ने संगीत सुन्नुहोस्।
5 व्यक्तिहरूसँग भेट्नुहोस् जुन तपाईंलाई सजिलो लाग्छ
6 एक पैदल र विचलित हुन्छ
7 आफैलाई लिप्त गर्नुहोस्
8 अनुसन्धान र लागू गर्नुहोस्
9 बक्सबाट सोच्नुहोस्
10 विधि र अराजकता बीच वैकल्पिक
11 आफूलाई मनपर्नेमा समर्पण गर्नुहोस्
12 असफलताको डरलाई जित्नुहोस्
कुनै सान्त्वना छैन
यदि तपाईं स्केचहरू भरिएको ठाउँमा पजोनहोल हुनुहुन्छ भने, केही पनि आउँदैन भने यसलाई अहिले नै फाइल गर्नुहोस्, आफ्नो कुर्सीबाट उठ्नुहोस् र पानीको गिलास पाउनुहोस्। त्यो गैर-आराम क्षेत्रबाट बाहिर निस्कनुहोस्।
श्वास बाहिर निकाल्नुहोस्
परियोजनाको बारेमा चिन्ता लिनु भनेको दायित्वको भाव हो। धेरै चिन्तित नहुनुहोस्, यसले अझ गाह्रो बनाउँछ। श्वास .. र जारी तनाव बाहिर निकास।
जबकि यो एक ध्यान भंग छ, यसले हामीलाई समाचार देखाउँदछ जुन पूर्ण रूपले रमाईलो छैन। यदि यसले तपाईको लागि लागत गर्छ भने, विच्छेदन गर्नुहोस् उनीहरूको क्षणको लागि, र तिनीहरूमा फर्कनुहोस् जब तपाईं काम समाप्त गर्नुहुन्छ।
तपाईंलाई मनपर्ने संगीत सुन्नुहोस्।
यो स्पष्ट छ कि त्यो गीत वा कलाकार सुन्नु जसले हामीलाई राम्रो महसुस गराउँछ केही सजिलो हुन्छ। तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ एक प्लेलिस्ट सिर्जना गर्दै तपाईंको मनपर्ने गीतहरूको साथ, र यदि यो नृत्य वा कुनै पनि मूल्यमा तिनीहरूलाई गाउन छ, यसको लागि जानुहोस्! आफैलाई अभिव्यक्त गर्दा दिमाग स्वतन्त्र हुन्छ र मनलाई स्फूर्ति दिन्छ।
व्यक्तिहरूसँग भेट्नुहोस् जुन तपाईंलाई सजिलो लाग्छ
ती व्यक्तिहरू जसले योगदान र घटाउनुहुन्न। त्यो तिमी तिनीहरूले राम्रो विचार ल्याउँछन् र उनीहरूसँग कुराकानीको राम्रो विषय छ वा तिनीहरू केवल ठूलो स्वरले हाँस्न प्रबन्ध गर्छन्। यदि तपाईंसँग धेरै समय छैन भने, कल गर्नुहोस्। त्यहाँ सधैं कोही छ जो मद्दत गर्न सक्छ।
एक पैदल र विचलित हुन्छ
तपाईंको डेस्कको बारे बिर्सनुहोस् र त्यो ढोकाबाट एक्लै वा तपाईंको घरपालुवा जनावर संग पैदल यात्रामा जानुहोस्। यदि तपाईं फोटोग्राफर लिन मन पराउनेहरू मध्ये एक हो भने पनि, तपाईंको क्यामेरा लिनुहोस् र तपाईंको मनपर्ने कतै चाहिएको फोटोहरू लिनुहोस्। बनावट, कोण, लाइट र र Explore अन्वेषण गर्नुहोस्। तपाईको दिमागको दाहिने पक्ष आभारी हुनेछ।
आफैलाई लिप्त गर्नुहोस्
जसरी चोकलेटको प्रसिद्ध ब्रान्डले हामीलाई ब्रेक लिन आमन्त्रित गर्दछ, किनकि यो यस्तै हो, आफैलाई लिप्त गर्नुहोस्। खाजाको लागि जानुहोस् जसले हामीलाई खुशी दिन्छ, दोषको भावना उत्पन्न नगरीकन, खराब मुडबाट छुटकारा पाउनको लागि यो द्रुत तरीका हो।
अनुसन्धान र लागू गर्नुहोस्
जिज्ञासा भनेको हामीलाई अन्वेषण गर्न ड्राइभ गर्दछ, र त्यसैले कार्यको हाम्रो ज्ञानलाई अझ गहन बनाउन। यो अनुसन्धान कार्यले विषयको अधिक निपुणतामा अनुवाद गर्दछ र गुणवत्ता डिजाइनमा अनुवाद गर्दछ। पिकासोले भने जस्तै "प्रेरणा अवस्थित छ, तर यसले तपाईंलाई काम गरिरहेको भेट्टाउनु पर्दछ"।.
हाम्रो आफ्नै जीवनका अनुभवहरूले हाम्रो दिमागलाई कन्फिगर गरेको छ संसारलाई निश्चित तरिकामा हेर्न र बुझ्नको लागि। हाम्रो मानसिक मोडेल अद्वितीय छैन वा सबै भन्दा राम्रो हो। मानौं हाम्रो दिमागलाई पुनः शिक्षा दिन र बिभिन्न आँखाहरु संग विश्व मा केन्द्रित गर्न सक्षम हुनु यो पहिलो चरण हो।
"यदि तपाइँ बिभिन्न परिणामहरू चाहानुहुन्छ भने, उही नगर्नुहोस्"। ए आइन्स्टाइन
विधि र अराजकता बीच वैकल्पिक
रचनात्मक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न, तपाईंले केहि नियमहरू पालना गर्न आवश्यक पर्दछ, केहि व्यवस्थाबद्धता। तर यो दिमागमा राख्नुहोस् कि नियमहरूको अधिकताले सिर्जनात्मक प्रक्रियालाई बाधित गर्न र जटिल बनाउन सक्दछ त्यसैले दुबै चरम बिचमा एक स्वस्थ संयोजन हुन सक्छ। यद्यपि यो आत्मसात गर्न गाह्रो छ, अराजकताबाट पनि क्रम उत्पन्न हुन्छ।
आफूलाई मनपर्नेमा समर्पण गर्नुहोस्
यो सत्य हो कि यो सँधै सम्भव हुँदैन तर सृष्टिकर्ताको हामीसँग जे गर्ने जुनसुकै कुराको साथ धेरै काम गर्नुपर्दछ। खुशी हुनु एक प्रभावकारी र छिटो तरीका हो हामीलाई जे मन पर्छ त्यो गर।
असफलताको डरलाई जित्नुहोस्
रचनात्मकतासँग प्रयोगको साथ धेरै कुरा गर्नुपर्दछ र प्रयोग गर्न हामीले हाम्रो डरलाई जित्नु पर्छ। रचनात्मकता हाम्रो आत्म आश्चर्य, उत्तेजित र अज्ञात को दुनिया मा बच्चाहरु को रूप मा प्रवेश गर्ने हाम्रो क्षमता फीड।
छविहरू - एन्टोनियो मौबाडे
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » रचनात्मक अवरोधको लागि सुझावहरू
म्याकलाई थोरै श्रद्धांजलि, हजारौं हलिउड चलचित्रहरूको लागि प्रसिद्ध पोस्टर कलाकार